कथा : सीट नं १२ - A complete Nepali news portal based on news & views
- ~मन्दिरा मधुश्री~
“नानी एक्लै जाँदैछेस्…! बाटोमा अलिख चनाखो हुनु…। आइमाई भएको सिट मिलाएर बस्नु है, लामो बाटो छ…।” म हिँड्ने बेलामा आमाले नारी हुनुको कमजोरी अथवा भनौ आमा हुनुको स्वाभाविक गुण देखाउदैँ मलाई ममत्व पस्कनु भयो । उहाँका आँखाबाट पुर्लुक्क आँशु झरे । मलाई यो नारीको कमजोरीपना त्यति उचित लागेन । त्यसैले मैले पनि नारी गुण देखाएर आमाको सार मिलाउनुको सट्टा नदेखेजस्तो गरेर टारेँ ।
काम विशेषले म काठमाडौँबाट विराटनगर जानुपर्ने थियो । घरमा बूढा भइसक्नुभएका आमा-बुबामात्र हुनुहुन्थ्यो । दाजुभाइहरू सबै परदेशमै थिए । त्यसैले मेरो सहयोगी कोही पनि थिएनन् । अर्कोतिर मैले आफ्नो सक्षमताको परिचय दिनु पनि थियो । त्यसकारण मैले मेरो यात्रा एक्लै नै गर्नुपर्ने थियो । आमा-बुबाको दृष्टिमा त म कमजोर नारीकै रूपमा गनिन्थेँ । त्यसैले पनि सुरक्षा र सजिलोको दृष्टिले मलाई दिउँसोको बसमा जाने सल्लाह दिनुभयो ।
म आफ्नो सामान बोकेर हिडेँ । बस स्टेण्डमा पुगेर टिकट काटेँ । विद्यार्थी सहुलियत भाडा दिएपछि मलाई चौध नं. को सिट देखाइदियो । सहुलियत दर भाडा वा रोजिएको अगाडिको सिट दुबैमा मैले एकलाई चुन्नु थियो । मैले सोचेँ- “आखिर गाडि एउटै त हो नि…अगाडि बसे पनि पछाडि बसे पनि के को फिक्री ?”
गाडीमा चढेँ । दाहिनेपट्ट झ्यालको सिट चौध नंको रहेछ । आफ्नो सामान त्यही सिटमुनि हालेँ, केही माथि छज्जीमा राखेँ । मनमा कौतूहल जाग्यो- “अर्को खाली सीट कसको होला ? आइमाई होला कि लोग्नेमान्छे ? तरुनी वा तन्नेरी नै होलान् कि बुढाबुढी ? तल्लो स्तरका भुत्रे झामे्र काम गर्ने ढाक्रे खालका होलान् कि उच्च स्तरका स्मार्ट…? म सोच्दै बसेँ …।
यो सीटमा कुनै आकर्षक युवक परे पनि लामो र पट्यारलाग्दो यात्रा सजिलै कट्थ्यो” भन्ने मिठो कल्पना गर्न थालें । अनि हिँड्ने बेलामा आमाले “आइमाई भएको सिट मिलाएर बस्नु है” भन्ने सम्झिएँ । अनि आमाको त्यस वाक्यप्रति उपेक्षित हाँसो हाँसे । किनकि कुनै तन्नेरी युवकसँगको सामीप्यतामा गरिने यात्राको मज्जा बिचरा मेरी बूढी आमालाई के थाहा र.. ।
अरू सिट एकाएक गर्दै भरिन लाग्यो, तर धेरै समयसम्म पनि मेरो सिटमा दाबी गर्न कोही पनि आएनन् । केही क्षणपछि एउटा झुत्रे..काम गरेर खाने जस्तो..सोझो..झुस्स दाह्री जुँगा भएको व्यक्ति नजिकै आएर “पन्द्र नंको सिट यही हैन” भन्यो ? मैले उसको हुलिया र स्थितिप्रति उपेक्षित भावले नाक खुम्चाउँदै आफू सभ्य हुनुको परिचय दिँदै “हो” भन्ने जवाफ दिएँ । मेरो भित्री आकाङ्क्षा र चाहना सबै चकनाचुर भयो । कहाँ स्मार्ट युवकको प्रतिक्षा गरिरहेकी म त्यस्तो झुत्रे झ्याउरेसँग यति लामो यात्रा गर्नुपर्ने…। कसरी दिनभरिको यात्रा यस्तो व्यक्तिसँग बसेर काटौं… । क्या बोर…। म छट्पट्टिएँ..। निस्सासिएँ…। बस्न नदिउँ भने ऊ उसको सिट दाबी गर्न आइरहेको छ…। दिउँ भने…उफ…!!
हुन त मजस्तो पढेलेखेको मान्छेले र आज एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि यस्तो अन्धविश्वास गर्न नचाहे पनि परम्परागत संस्कारमा हुर्किएको मेरो मनले सोच्यो- “कतै बाह्र नं. सिट साँच्चै नै नफाप्ने पो हो कि…? अब फापे नफापेको प्रमाण त मेरो सिट पार्टनरको रूपमा आउने यात्रीले गर्छ । यदि मेरो भित्री चाहना अनुरूपको यात्री पर्‍यो भने फापेको मान्नुपर्ला…। नत्र नफापेको…।” मलाई अर्को डरपनि थियो कतै यो सिट दाबी गर्ने कोही त आउँदैन ? यो सिट खाली नै छ भन्ने निश्चित पनि त थिएन ।
मलाई के गरौँ कसो गरौँ भयो । हुन त एघार नं.को सीट पनि खाली नै थियो । तर म त्यता बस्न चाहन्नथेँ । किनकि उभिएका मान्छे वा लोकल यात्रीहरू अथवा कन्डक्टरहरू आफ्नो जीउ दराल्दै हिँडेको अनि उभिने बहानामा बस्नेसँग त्यसमा पनि केटीसँग ढेसिएको मलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । त्यसैले झ्यालपट्टि बस्न मलाई मनपर्थ्यो र आफूलाई सुरक्षित ठान्थेँ । मैले खाली भएको सिटपट्टि इशारा गर्दै भने- “म झ्यालतिर बस्छु…। तपाई यता बस्नुस् न हुँदैन र ?” यति भन्दै मैले उसको अनुहार हेरेँ । अहँ ऊ मेरो चहानानुरूपको आकर्षक रूप रङको स्मार्ट पटक्कै थिएन ।
मलाई झनक्क रीस उठयो ऊप्रति…। किन र के कारणले रिस उठयो त्यो मलाई थाहा थिएन । तर रिस उठनुपर्ने वास्तविक कारण त्यही मान्छे, जुन मेरो चहाना अनुरूपको नहुनु नै थियो सायद…। उसको कुनै प्रत्यक्ष दोष थिएन । थियो केवल मेरो कल्पना र मनले सोचेजस्तो सुन्दर नहुनु मात्र ।
“कस्तो अनुहार पनि नपरेको मान्छे…। त्यसमा पनि कालो चस्मा लगाएको…। हेर्दा गुण्डाजस्तो…। हैन, अनुहार पनि हुनुपर्छ नि गगल्स लगाउनलाई त…। सुहाओस नसुहाओस् । केटीलाई चिहाई चिहाई हेर्न लगाएको होला नि…।” एक्कासी मनमनै आक्रोस पोखेँ ।
ममा रूपको घमण्ड थियो । सायद त्यसैले होला म नराम्रो मान्छेलाई घृणा गर्दथेँ । आफूजस्तै राम्रो मान्छेसँगमात्र बिहे गर्छु भन्ने भित्री आकाङ्क्षा थियो । त्यसैले त अहिले पच्चीस कट्दा पनि बिहे गरेकी थिइनँ । आफूले खोजेजस्तो सुन्दर नभेटेकोले…। अनि अर्कोकुरा, म नराम्रा मान्छे सबैलाई फटाहा नै ठान्थेँ र उसलाई पनि मैले त्यस्तै ठानेँ ।
धेरै लोग्ने मान्छेहरू गाडीमा वा अन्य ठाँउमा भएको भीडको फाइदा लिइहाल्छन् । सिटमै बसेको छ भने पनि विभिन्न बहानाले छुन खोज्छन् । हात बाँधेर बस्ने बहानामा केटीका संवेदनशील अंगमा छुन खोज्छन् कोही भने निदाएर र थाहा नपाएको (बाहाना) अभिनय गर्दै आफ्नो शरीरलाई लथालिङ्ग छोडिदिन्छन् अनि केटीको काँधमा टाउको बोकाउन पनि पछि पर्दैनन् । उभिएको छ भने पनि जहाँ केटी छ, त्यहीँ नजिक आइपुग्छन् । अनि गाडीको असन्तुलनसँगै आफ्नो शरीर पनि असन्तुलन भएको बहाना गर्दै केटीसँग ठोकिन्छन् । यो त उनीहरूको सामान्य प्रयासमात्र हो ।
म यस्तै यस्तै सोचिरहेकी थिएँ । उसले फेरि सोध्यो- “बैनी ! कहाँ जाने हो ?”
“विराटनगर” मैले सटिक उत्तर दिएँ सकभर उसलाई आफ्नो सही परिचय नदिने उद्देश्यले आफ्नो ठेगाना भनिन् ।
“म पनि जनकपुर जान भनेर हिँडेको थेँ, फेरि जान मन लागेन…। काँकडभिट्टासम्म जानुपर्ने काम थियो, उतै जान्छु भनेर लागेको…” मैले नसोधिकन नै उसले आफ्नो गन्तव्य बतायो ।
धादिङ पुगेपछि आफ्नै गतिमा गुडिरहेको गाडि घचक्क रोकियो । सबै यात्रुहरूले उत्सुकताबस बाहिर हेरे । खालासीले भन्यो “ल गाडी जाममा परेजस्तो छ ।” मैले पनि झ्यालबाट हेरेँ अगाडीको सडक पुरै गाडी नै गाडी । हल्लखल्ला भयो, “कृष्ण भीरमा पहिरो गएको छ अरे । गाडी जानै सक्दैन…। अब के गर्ने…?” सबैको मुहारमा प्रश्न झल्कियो ।
मेरो सहयात्री पनि निकैबेर पछि ब्युँझियो वा त ब्युँझिएको अभिनय गर्‍यो । “के भयो ?” भन्दै चनाखो भयो । मलाई बोल्न करै लाग्यो- “गाडी जाममा पर्‍यो अरे ।”
खानेकुरा बोकेका यात्रुहरूले आफूसँग भएका खानेकुराहरूले भोक मार्न थाले । नहुनेहरू सन्तोष मानेर निन्द्रासँग भोक साट्ने प्रयास गरिरहेका थिए । सधैँ नौ बजे खाना खाने बानी । आज त बाह्र बजिसकेको थियो । त्यसैले मैले पनि आफ्नो सिट पार्टनर नभएको मौका पारेर कुपुकुपु खाएँ आफूले बोकेका खानेकुरा । एकक्षण पछि त ऊ पनि आइपुग्यो ।
“म एउटा व्यवसायिक संस्थामा काम गर्छु ।” उसले भन्यो । “म त्यसको व्यवस्थापक हुँ । संस्थाको कामले नै काठमाडौँ आएको थिएँ । एउटा मान्छेलाई नभेटी नहुने थियो । अब काँकडभिट्टा जाँदैछु ।”
बामे सरेर पाँचबजे बल्ल नारायणगढ आइपुग्यो र रोकियो गाडी थचक्क । सबै यात्रुहरू चल्मलाउन थाले र उत्सुकतावश झयालबाहिर हेर्नथाले । ऊ पनि ब्युँझियो र गगल्स निकाल्यो आँखा (पुछ्यो) मिच्यो । मैले त्यसबेला देखेँ, उसको एउटा आँखा त पुरै सेतो पो रहेछ । सायद फूलो परेर बिग्रेको होला । त्यसैले पो उसले गगल्स लगाएको रहेछ । बल्ल मलाई थाहा भयो उसले गगल्स लगाएको वास्तविकता…। यसबेला मलाई मेरो शङ्का र उसप्रतिको उपेक्षाप्रति झिनो पश्चाताप लाग्यो…।
सधैँ यसबेला आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने गाडी आज त्यो समयमा लगभग आधा बाटोको दुरीमात्र पार गरेको थियो । यसपछि गाडीले तीव्र बेग लियो । चन्द्रनिगाहपुर पुग्दा रातको दश बजेको थियो । त्यहाँपनि खाना पाइएन । एउटामा मात्र अघिल्लो बसका यात्रुले खाएर बाँकी रहेको खाना भेटियो । नपाउनु भन्दा जेजस्तो भए पनि त्यहि खाने भनेर सबैले खाना खाए । मेरो सहयात्री पनि गयो र मलाई पनि आग्रह गर्‍यो खान जान । मैले नखाने भनेँ । मैले आफूसँगै भएको खानेकुरा खाएँ ।
पुनः मेरो ध्यान ऊप्रति केन्द्रित भयो । ऊ एकदम सर्तक मुद्रामा थियो । सायद निदाएको बेलामा अनजानवश मलाई छोइन्छ कि भनेर छेउमा र सर्तक भएर बसेको थियो ।उसको हरेक पक्षबाट मूल्यांकन गर्दा मेरो सोचाइभन्दा एकदम भिन्दै निस्कियो ऊ त । मेरा मनका अघिका ऊ प्रतिका भावहरू पुरै परिवर्तन भइसकेको थियो अब । । उसले जसरी मलाई ‘बहिनी’ भेनेर सम्बोधन गरेको थियो, त्यो सम्बोधनको र सम्बन्धको मर्यादा पनि त्यसैगरी राखेको थियो ।
मेरो ऊ प्रतिका भावनाले अर्कै मोड लिए । अघि मलाई उसले मप्रति कुभावना राख्छ, गलत व्यवहार गर्नसक्छ भनेर रिस उठेको थियो । अब मलाई “उसले किन त्यस्तो व्यवहार गरेन ? पुरुष भएर पनि किन उसले आफ्नो पौरुषत्व देखाउने प्रयास गरेन…।” भनेर पो रिस उठन थाल्यो ।
मैले उसलाई हेर्दै मनमनै गाली गरेँ- “यो कस्तोखालको लाटो वा हुस्सु पो रहेछ…। काँतर अनि डरछेरुवा…। पुरुष भएर पनि लाछी…। कि यो कतै नपुंशक पो हो कि…? नत्र यत्रो लामो यात्रा…सँगै एउटी नौजवान सुन्दरी केटी…। त्यसमा पनि एक्लै…। कस्तो समयको सदुपयोग गर्न, मौकाको फाइदा उठाउन नजानेको होला…। गाडीमा न त उसको परिचित कोही थिए, न त मेरो नै…। फेरि, ऊ र म पूर्णपरिचित पनि त थिएनौँ…कस्तो उल्लु …।
उसले चाहेका भए हाम्रो यतिलामो यात्रा रङ्गिन र रमाइलो पनि त हुनसक्थ्यो नि…। उसले मीठो-मीठो गफ गरेको भए हुन्थ्यो…। हाँसे हँसाएको भए हुनेथियो । मेरो सुन्दरताको बयान गर्दै मलाई फुरुक्क पारेको भए हुन्थ्यो…। जिस्किएकोे, चलेको भए हुन्थ्यो…। गाडीको कुदाई वा उफ्राईसँगै हल्लिएको बहानामा घरिघरि मसँग ठोकिएको भए हुन्थ्यो । अनजानमा भएको अभिनय गर्दै जानाजान ठोकिएको भए हुन्थ्यो…।
थुइक्क मोरा ! कमसेकम हातले छोएको भए त हुने । कति रमाइलो हुन्थ्यो होला । मनमनै कुडिएँ म । मलाई उप्रति एकातिर झन् रिस उठिरहेको थियो भने अर्कोतिर एकदम श्रद्धा पनि लागिरहेको थियो ।
अनायास खलासीले “इटहरी झर्ने कोही छ” भन्यो । उ “छ है” भन्दै उठ्यो । आफ्नो झोला टिप्यो र ‘गएँ ल’ भनेर उत्रियो ।
गन्तब्यमा पुगेर गाडी रोकियो मैले आफ्नो प्यारो बाह्र नं.को सिटलाई त्यसैगरी मन नलागी नलागी छोडेँ, जसरी मैले काठमाडौँ, थानकोट, कृष्णभिर, त्रिशुली…नारायणघाट, हेटौडा लगायत बाइस घण्टाको सहयात्रीलाई छोडेकी थिएँ ।